မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2015-02 > ဘုရားသခင်၏နိုင်ငံတော်အပိုင်း (4)
Zweitens ist uns mit unserem Zeugnis lediglich eine eingeschränkte Sicht auf die Zukunft möglich, die uns nur einen flüchtigen Blick auf das künftige Reich Gottes erhaschen lässt. In seiner ganzen Wirklichkeit aber vermag sie es uns gegenwärtig nicht zu erfassen. Wir sehen „nur ein unklares Bild“ (1. ကောရိန္သု ၁3,12;Gute Nachricht Bibel). So ist es zu verstehen, wenn wir von einer „vorläufigen“ Sicht sprechen.Drittens ist unser Bezeugen zeitgebunden. Werke kommen und gehen. Einiges, was im Namen Christi vollbracht wird, mag länger als anderes Bestand haben. Einiges, was wir mit unserem Handeln bezeugen, mag nur flüchtig und nicht von Dauer sein. Aber als Zeichen verstanden, muss unser Bezeugen auch nicht ein für alle Mal Gültigkeit besitzen, um auf das verweisen zu können, was wirklich von Dauer ist, die ewige Herrschaft Gottes durch Christus im Heiligen Geist.Somit ist unser Bezeugen weder allgemeingültig noch vollkommen, erschöpfend oder unumstösslich, obwohl es von grossem, ja unabdingbarem Wert ist, da es diesen aus der Beziehung zur künftigen Realität des Reiches Gottes gewinnt.
ရှုပ်ထွေးသောပြsolvingနာကိုဖြေရှင်းရန်မှားယွင်းသောချဉ်းကပ်နည်းနှစ်မျိုးရှိသည်။ အချို့ကဤသို့မေးကောင်းမေးလိမ့်မည် -“ ဒါဆိုရင်သူတို့ဟာဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုမရည်ရွယ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့ရဲ့လက်ရှိအတွေ့အကြုံနှင့်သက်သေခံချက်ကဘာလဲ။ ဒီတော့ဘာဖြစ်လို့နှောင့်ယှက်ရတာလဲ ဒါကဘာကိုသုံးမှာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စံနမူနာကိုမထုတ်လုပ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစီမံကိန်းတွင်အဘယ်ကြောင့်ဤမျှကြိုးစားအားထုတ်သင့်သနည်းသို့မဟုတ်အရင်းအမြစ်များစွာအသုံးချသင့်သနည်း။ ” အခြားသူများကဤသို့ဖြေနိုင်သည် -“ ဒီထက်ပိုပြီးရှုပ်ထွေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့ကိုဘုရားသခင်လို့ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူး။ တစ် ဦး စံပြအောင်မြင်ရန်နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအရာတစ်ခုခုပြီးမြောက်။ သူ၏အကူအညီဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကျွန်ုပ်တို့အစဉ်မပြတ်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ” ရှုပ်ထွေးသော“ တည်ရှိပြီးသော်လည်းမပြီးစီးသေးသော” နိုင်ငံတော်၏ရှုပ်ထွေးသောခေါင်းစဉ်နှင့် ပတ်သက်၍ တုံ့ပြန်မှုများမှာအထက်တွင်ကိုးကားခဲ့သည့်အတိုင်းဘုရားရှိခိုးကျောင်းသမိုင်းတွင်ဤသို့သောကွဲပြားခြားနားသောအဖြေများရှိခဲ့သည်။ မွေးဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ဤချဉ်းကပ်မှုနှစ်ခုနှင့် ပတ်သက်၍ သတိပေးချက်များရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့သည်ကြီးလေးသောအမှားများအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ တရားဝင်အနေဖြင့်ဤကိစ်စနှငျ့ ပတျသကျ၍ အောငျမွငျမှု၊
ဘုရားသခင့်အကူအညီဖြင့်သော်လည်းဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်နိုင်ခြင်းကိုဆန့်ကျင်သူများကနိမိတ်လက္ခဏာများကိုသိမြင်ခြင်းနှင့်သဘောပေါက်နားလည်ခြင်းကိုခံယူလိုစိတ်မရှိကြပါ။ ဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ ကမ္ဘာ့ပြောင်းလဲသူ” များဖြစ်နိုင်သည်ဟူသောအချက်ကိုသူတို့မတားဆီးနိုင်ပါ။ လူများအလုံအလောက်သာခရစ်တော်၏အကြောင်းတရားကိုစိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့အပ်နှံ။ လိုအပ်သောဈေးနှုန်းကိုပေးဆပ်ရန်ဆန္ဒရှိမည်ဆိုလျှင်ဤသို့ဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်လူအများလုံလောက်စွာမမောနိုင်မပန်းနိုင်စိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်အလုံအလောက်အလုပ်လုပ်ပြီးမှန်ကန်သောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများနှင့်နည်းလမ်းများကိုသိရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏ကမ္ဘာသည်ထိုပြီးပြည့်စုံသောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်သို့ပိုပိုပြီးပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုးပမ်းမှုများအားဖြင့်နိုင်ငံတော်သည်တဖြည်းဖြည်းပြီးမြောက်လာသောအခါခရစ်တော်ပြန်ကြွလာမည်။ ဤအရာအားလုံးကိုဘုရားသခင့်အကူအညီဖြင့်သာရနိုင်သည်။
၎င်းကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းမဖော်ပြသော်လည်း၊ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့် ပတ်သက်၍ ဤအမြင်ကကျွန်ုပ်တို့ရရှိသောအရာသည်ယေရှုခရစ်၏မြေကြီးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်သွန်သင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်နိုင်သမျှအလားအလာကြောင့်ဖြစ်သော်လည်းအမှန်တကယ်အကောင်အထည်ပေါ်မလာဟုယူဆသည်။ ခရစ်တော်သည်ယခုသူစွမ်းနိုင်သည့်အလားအလာကိုယခုကျွန်ုပ်တို့ဖြည့်စွက်။ နားလည်နိုင်သောပုံစံဖြင့်အောင်နိုင်ခဲ့သည်။
အောင်ပွဲခံ၏တုန့်ပြန်မှုသည်အထူးသဖြင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာတရားမျှတမှုနှင့်ပြည်သူ့ကျင့် ၀ တ်များပြောင်းလဲခြင်း၊ ပုဂ္ဂလိကဆက်ဆံရေးနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာအပြုအမူများဖြစ်ပေါ်လာစေမည်ဟုကတိပေးသောအားထုတ်မှုများကိုအထူးသဖြင့်အလေးထားလေ့ရှိသည်။ ထိုသို့သောအစီအစဉ်များအတွက်ခရစ်ယာန်များကိုစုဆောင်းသူအများစုသည်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိမှီခိုနေရသည်ဟူသောအချက်ပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ သူက "သူရဲကောင်းများ" ကိုသာရှာဖွေနေသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားစံနမူနာကောင်း၊ ကြိုတင်ရေးဆွဲထားသောမူကြမ်း၊ သူ၏နိုင်ငံတော်၏အစီအစဉ်အမှန်ကိုပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်ယခုလက်တွေ့ကျင့်သုံးရန်ချာ့ချ်မှတက်လာပြီဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စုံလင်ခြင်း၌ပေးထားပြီးဖြစ်သောအရာများကိုနားလည်ရန်အလားအလာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤစံနှုန်းကိုနားလည်သဘောပေါက်ပြီး၎င်းကိုနောက်ကွယ်မှလုံးလုံးလျားလျားရပ်တည်နိုင်မည်ဆိုပါကဘုရားသခင်ပြုလုပ်ခဲ့သောအရာအားလုံးအတွက်သူ့အားကျွန်ုပ်တို့မည်မျှစိတ်ရင်းမှန်ဖြင့်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြသရန်အတွက်သာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်စံပြကိုနားလည်နိုင်ရန်အတွက်သာလျှင်၎င်းသည်အောင်မြင်လိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်“ အစစ်အမှန်” နှင့်ဘုရားသခင့်စံနမူနာအကြားကွာဟချက်ကိုပိတ်ပစ်နိုင်ကြသည်။
Diese Worte Jesu (Johannes 13,35) besagen nicht, dass andere dadurch zum Glauben kommen, sondern lediglich, dass man diese in der Nachfolge Jesu Stehenden als die Seinen erkennen wird, da sie sich, wie er, in Liebe üben. Er weist damit darauf hin, dass unser Miteinander in Liebe dazu dienen kann, andere auf Christus zu verweisen. Das ist wunderbar! Wer wollte sich dem nicht anschliessen? Aus seinen Worten geht jedoch nicht hervor, dass der Glaube / das Heil anderer, von dem Ausmass der Liebe seiner Jünger untereinander, abhängt. Unter Berufung auf diesenVers ist es logisch falsch, daraus im Umkehrschluss zu folgern, wenn es die in der Nachfolge Christi Stehenden an Liebe ermangelten, andere sie nicht als solche zu erkennen vermögen und infolgedessen nicht an ihn glauben. Wenn dem so wäre,würde Gott in keiner Weise getreulicher sein als wir. Die Worte „sind wir untreu, so bleibt er doch treu“ (2. တိမောသေ 2,13) träfen dann nicht zu. All jene, die zum Glauben kamen, haben erkannt, dass die Kirche als Ganze, wie auch ihre einzelnen Gemeindeglieder, in Widersprüche verstrickt und unvollkommen sind. Sie vertrauten auf ihren Herrn, weil sie zugleich den Unterschied zwischen dem einen, dem Lobpreis zuteilwird, und jenen, die ihn lobpreisen, erkannten. Hinterfragen Sie einfach Ihren eigenen Glauben und schauen Sie, ob es sich nicht so verhält. Gott ist grösser als unser Bezeugen seiner selbst. Er ist getreulicher als wir. Natürlich ist dies keine Ausrede dafür, treulose Zeugen der vollkommenen Liebe Christi zu sein.
တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်မှု၏အဖြေကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခြားရောင်ခြည်၏အဆုံးတွင်အချို့သည်ယခင်ကရှိသေးသော်လည်းမပြီးမြောက်သေးသောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ရှုပ်ထွေးသောပြissuesနာများကိုယခုတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည့်အရာများစွာမရှိဟုငြင်းခုံခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းခဲ့ကြသည်။ သူတို့အတွက်ဘုန်းတော်သည်အနာဂတ်တစ်ခုတည်းတွင်တည်ရှိသည်။ ခရစ်တော်သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသူ၏ဓမ္မအမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွင်အောင်ပွဲခံခဲ့သည်။ တစ်နေ့တွင်သူတစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်၎င်းကိုပြီးပြည့်စုံစွာတိုးတက်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ယခုခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်ပြန်ကြွလာခြင်းကိုစောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့မှသာမြေကြီးပေါ်တွင်နှစ်အနည်းငယ်အုပ်ချုပ်မှုအပြီးတွင်သူသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကောင်းကင်သို့ဆောင်ယူသွားနိုင်လိမ့်မည်။ ယခုခေတ်၌ခရစ်ယာန်များသည်အပြစ်လွှတ်ခြင်း၊ သဘာဝအပါအ ၀ င်ဖန်ဆင်းခြင်းအပါအဝင်ကောင်းချီးအချို့ရရှိပြီးဖြစ်သော်လည်းလူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သိပ္ပံနှင့်စီးပွားရေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများသည်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုနှင့်မကောင်းသောအကျင့်များမှသားကောင်များဖြစ်လာသည်။ ဤအရာအားလုံးသည်မကယ်တင်နိုင်ပါ။ ထာဝရကာလနှင့်စပ်လျဉ်း။ ဤအရာအားလုံးအတွက်ကောင်းကျိုးအတွက်မည်သည့်ပြင်ဆင်မှုမျှမရည်ရွယ်ပါ။ ၎င်းသည်ဘုရားသခင်၏အမျက်တော်မှတစ်ဆင့်အပြစ်စီရင်ခြင်းသို့သာအပ်နှံပြီး၎င်းကိုအကြွင်းမဲ့အဆုံးသတ်စေနိုင်သည်။ လူအများစုသည်ကယ်တင်ခြင်းအတွက်အပြစ်ရှိသောဤကမ္ဘာမှဖယ်ရှားခံရရန်လိုအပ်သည်။ ရံဖန်ရံခါဤဆိတ်ငြိမ်သောချဉ်းကပ်နည်းအရခွဲထွက်ရေးပုံစံကိုသင်ကြားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤလောက၏လောက၏ကြိုးပမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးရှောင်ရှားရမည်။ အခြားငြိမ်သက်အေးဆေးစွာပြောဆိုသူများ၏အဆိုအရဤကမ္ဘာ၏မျှော်လင့်ချက်ကင်းမဲ့မှုနှင့်အကူအညီမဲ့မှုသည်မိမိကိုယ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာနည်းမျိုးစုံဖြင့်ကိုင်စွဲထားနိုင်သည်ဟုကောက်ချက်ချစေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်နောက်ဆုံးတွင်အရာရာတိုင်းတရားရုံးသို့အရာခပ်သိမ်းကျန်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများအတွက်မူငြိမ်သက်အေးဆေးစွာ passive ချဉ်းကပ်နည်းဆိုသည်မှာခရစ်ယာန်များသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုယ်တိုင်အတွက်ဖြစ်စေ၊ အသိုင်းအဝိုင်းအတွင်း၌ဖြစ်စေကျန်ကမ္ဘာ့အခြားဒေသများမှသီးခြားရပ်တည်နိုင်သည်။ မိသားစုနှင့်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းများ၏ကိုယ်ကျင့်တရားအပေါ်ဤတွင်အလေးထားလေ့ရှိသည်။ သို့သော်ခရစ်ယာန်အသိုင်းအဝိုင်း၏ပြင်ပသြဇာလွှမ်းမိုးမှုသို့မဟုတ်အပြောင်းအလဲကိုဖြစ်ပေါ်စေရန်တိုက်ရိုက်ကြိုးပမ်းမှုများသည်အများစုကိုယုံကြည်ခြင်းအားထိခိုက်စေသည်ဟုရှုမြင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံတွင်ပင်ပြစ်တင်ရှုတ်ချခြင်းခံရသည်။ မယုံကြည်သောပတ်ဝန်းကျင်ယဉ်ကျေးမှုကိုတိုက်ရိုက် ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်းသည်အလျှော့ပေးလိုက်လျောခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ပျက်ကွက်ခြင်းသို့သာ ဦး တည်သွားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်ရသည်။ ထို့ကြောင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားသန့်ရှင်းမှုသည်အဓိကပြissuesနာဖြစ်သည်။
ယုံကြည်ခြင်း၏ဤစာဖတ်ခြင်းအရသမိုင်း၏အဆုံးကိုဖန်ဆင်းခြင်း၏အဆုံးအဖြစ်ရှုမြင်ကြသည်။ သင့်ကိုငါဖျက်ဆီးမည်။ ထို့နောက်အချိန်နှင့်အာကာသ၏တည်ရှိမှုမရှိတော့ပါ။ ယုံကြည်သူများဖြစ်သောအချို့သည်ဤဖျက်သိမ်းမှုဖြစ်စဉ်မှလွတ်မြောက်ပြီးဘုရားသခင်နှင့်ထာဝရတည်ရှိမည့်ထာဝရကောင်းကင်ဘ ၀ ၏စုံလင်စင်ကြယ်သော ၀ ိညာဉ်ရေးရာလက်တွေ့ဘ ၀ သို့ရောက်သွားလိမ့်မည်။ အတော်များများမူကွဲနှင့်အလယ်အလတ်ရာထူးဘုရားကျောင်းများတွင်အသုံးပြုကြသည်။ သူတို့ထဲကအများစုဟာသို့သော်ဒီရောင်စဉ်အတွင်းရှိတစ်နေရာနှင့်တစ်ဖက်သို့မဟုတ်အခြားဆီသို့ ဦး တည်အမှီ။ အဆိုပါအောင်ပွဲခံအနေအထားသည်အကောင်းမြင်ဝါဒနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတည်ဆောက်ပုံရှိသောလူတို့အားကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလေ့ရှိသည်။ သို့သော် ထပ်မံ၍ ၎င်းတို့သည်အစွန်းရောက်မှုတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုအပြည့်အဝကိုက်ညီမှုရှိသောသီးခြားအုပ်စုတစ်ခုကိုမဖြေရှင်းနိုင်သောအကြမ်းဖျဉ်းယေဘူယျများဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားဘုရားသခင့နိုင်ငံတော်၏အမှန်တရားနှင့်အဖြစ်မှန်အပြည့်အဝမသိရသေးသောရှုပ်ထွေးသောပြproblemsနာများကိုရိုးရှင်းစေရန်တစ်နည်းမဟုတ်တစ်နည်းကြိုးစားသည်။
သို့သော်သမ္မာကျမ်းစာနှင့်ဘာသာရေးအယူဝါဒများနှင့်ပိုမိုကိုက်ညီသောအခြားနေရာတစ်ခုမှာအစွန်းနှစ်ဖက်ကိုကျော်လွှားရုံတင်မကဘဲဤကဲ့သို့သော polarization ကို၏အယူအဆသည်မှားသည်ဟုယူမှတ်သည်။ အကြောင်းမှာ၎င်းသည်သမ္မာကျမ်းစာဖွင့်ပြချက်အားတရားမျှတမှုမရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အောင်ပွဲခံနှင့်တိတ်ဆိတ်သည့်အခြားရွေးချယ်စရာများအပြင်၎င်းတို့၏သက်ဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များအကြားပြုလုပ်သောဆွေးနွေးမှုများသည်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်၏ရှုပ်ထွေးသောအမှန်တရားကအငြင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စရပ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ရပ်တည်ရန်လိုအပ်သည်ဟုယူဆကြသည်။ ဘုရားသခင်သည်တစ်ခုတည်းကိုသာပြီးမြောက်သည်ဖြစ်စေ၊ ဤရှုထောင့်နှစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့၏သဘောထားနှင့်တစ်နေရာရာမှာထိုင်လိုခြင်းမရှိပါကတက်ကြွလှုပ်ရှားသူအဖြစ်ခွဲခြားသတ်မှတ်ရန်လိုသည်ဟုထင်မြင်စေသည်။ ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်တည်ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်းအပြည့်အဝနားမလည်သေးသောဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်နှင့်ပတ်သက်သောကျမ်းစာအနေအထားသည်ရှုပ်ထွေးသည်။ သို့သော်မည်သည့်တင်းမာမှုအတွက်မျှအကြောင်းပြချက်မရှိပါ။ ဆိုလိုတာကအစွန်းနှစ်ဖက်ကြားမှာအလယ်အလတ်အလယ်အလတ်အနေအထားကိုဟန်ချက်ညီအောင်ဖန်တီးဖို့မဟုတ်ပါ။ ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်အကြားတင်းမာမှုမရှိပါ။ ၎င်းအစား၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြည့်စုံပြီးဖြစ်သော်လည်းဤတွင်နေထိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်ထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိဆောင်းပါး၏ဒုတိယအပိုင်း၌တွေ့ခဲ့ရသည့်အတိုင်း - အမွေဆက်ခံခြင်းအသုံးအနှုန်းနှင့်အတူအတော်လေးပုံဖော်နိုင်သည့်မျှော်လင့်ချက်အဆင့်တစ်ခုတွင်နေထိုင်နေကြသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်တစ်နေ့တွင်အပြည့်အဝအကျိုးကျေးဇူးရရှိမည့်အသီးများရရှိခြင်းကိုငြင်းပယ်ခံရဆဲဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏အမွေအနှစ်များအားပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်းသေချာသည်နှင့်အညီနေထိုင်လျှက်ရှိသည်။ ဤဆောင်းပါးတွဲ၏နောက်ဆောင်းပါးတွင်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာများကိုဆွေးနွေးပါမည်။ ဆိုလိုသည်မှာလာမည့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ပြီးဆုံးမည်ဟုမျှော်လင့်ချက်တွင်ဤတွင်နှင့်ယခုနေထိုင်ခြင်းကိုဆိုလိုသည်။